गौतमको इच्छामा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि |
काठमाडौं : नेकपा नेता वामदेव गौतम उपनिर्वाचनबाट संसद् छिर्न खोज्दै छन्। यसका लागि काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धर सिट छाड्न तयार भइसके। पार्टी नेतृत्व भने गौतमसँग असन्तुष्ट देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसबारे बोलेका छैनन्। गौतमका पक्षमा रहेका भनिएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि बुधबार ‘सिट गुम्ने गरी उपनिर्वाचनमा नजाने’ विचार व्यक्त गरे। मानन्धरले ‘स्वीकृति पत्र’ अध्यक्ष दाहाललाई नै बुझाएका थिए।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता ईश्वर पोखरेल भने विपक्षमा छन्। पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमै सांकेतिक विरोध जनाएका छन्। श्रेष्ठ भने बोलिसकेका छैनन्। रामबहादुर थापा पक्ष/विपक्ष नदेखिने मनस्थितिमा छन्। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पार्टीले निर्णय गरे गौतमलाई असहयोग गर्ने पक्षमा छैनन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल केही बोलेका छैनन्। मानन्धरको स्वीकृतिपत्र ‘सरप्राइज’का रूपमा आएको भन्दै नेकपाभित्रको पूर्वएमाले समूह सशंकित देखिएको छ।
‘एकाएक रामवीरजीको राजीनामा दिने विषय कसरी आयो ? सरप्राइज नै भयो,’ एक स्थायी समिति सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो रहस्यपूर्ण छ।’ स्थायी समिति सदस्य भीम रावल खुलेर विपक्षमा देखिएका छन्। उनले पार्टी जीवनमा दीर्घकालीन महत् राख्ने निर्णयमा आन्तरिक छलफल हुनुपर्नेमा निहित स्वार्थमा प्रस्ताव आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘विधि प्रक्रिया र राष्ट्रिय हितबारे स्थायी समिति बैठकमा छलफल आवश्यक छ। राष्ट्रिय र पार्टीजीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा छलफलबिना निहित स्वार्थ र आवेगले निष्कर्ष निकाल्ने काम कतै नहोस्’, रावलले भने।
अध्यक्ष दाहालले भने पार्टीभित्र छलफल बाँकी रहेको बताए। ‘काठमाडौं ७ मा उपचुनाव हुने विषयमा पार्टीभित्र निर्णय भइसकेको छैन। पार्टीको सिट गुम्ने गरी उपचुनाव हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस्,’ दाहालले ताप्लेजुङ पाथीभरा समाजले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने।
सचिवालय सदस्य पोखरेलले फेसबुकबाटै सांकेतिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ‘अहिले हामी भन्दै छौं, हामी थप एकताबद्ध बनेका छौं ! कता हो कता, शक्तिशाली पनि बनेका छौं ! तर हाम्रो यो स्थितिलाई सच्चा शक्तिमा बदल्नका लागि विगतमा हामी स्वयंले स्थापित गरेका विचार, विधि, मान्यता, अभ्यास र आचरणलाई नयाँ स्तरमा उठाउनु र स्थापित गर्नु जरूरी छ,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘प्राप्त भएको उचाइसँगै चुनौती पनि प्रकट हुन सक्छन् भन्ने कुरा यतिबेला हेक्का राख्नु जरुरी छ।’
‘वामदेव पछि हट्छन्’
काठमाडौं ७ को उपचुनावबाट गौतम पछि हट्न सक्ने नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले दाबी गरे। ‘वामदेवका विषयमा बाहिर जे चर्चा चलेको छ, भित्र त्यस्तो छैन,’ ती नेताले भने, ‘वामदेव उठ्ने होइन, यो भइरहेको चर्चा उठ्नकै लागि पनि होइन।’
शीर्ष नेताकै असन्तुष्टि र घेराबन्दी, विपक्षीको रणनीति र निर्वाचन क्षेत्रको भूगोललगायतका कारण गौतम पछाडि हट्न सक्ने उनको दाबी छ। गौतम मानन्धरको घोषणापछिका प्रतिक्रिया बुझेर बसेको उनीनिकट एक नेताले बताए। सामाजिक सन्जालमा भने गौतमको स्टाट्समा अधिकांशले आलोचना गरेका छन्।
कार्यदल बनाएर विवाद समाधान गर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव